Prof. Dr.Nyan Win Kyaw – Healthy Life Journal
Prof. Dr.Nyan Win Kyaw
ပါမောက္ခဒေါက်တာ ဥာဏ်ဝင်းကျော် ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကုဆရာဝန်ကြီး
Posts By Prof. Dr.Nyan Win Kyaw
သူ့စိတ်ကြိုက် မင်္ဂလာဆောင်မယ် . . .
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဦးကျော်မင်းနိုင်ရဲ့ အသက် ၈၇ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူက ၈၇ နှစ်ဆိုတဲ့ အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် နုပျိုလန်း ဆန်းဖျတ်လတ်နေပါတယ်။ စကားပြောရင်လည်း လူငယ်လေးတစ်ယောက်လို ခပ်သွက်သွက်ပြောတတ်တယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက လက်ဝှေ့အားကစားလုပ်တတ်သူဖြစ်လို့ ခန္ဓာကိုယ်သန်စွမ်းကျစ်လျစ်ပါတယ်။ သူနဲ့အတူနေတဲ့ တူဖြစ်သူက...
အကြောဆွဲနေတဲ့ ၁၀ တန်းကျောင်းသူလေး
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) “သမီးလေး ၀င့်ဝါ . . ဒီနှစ် ၁၀တန်းဆိုတော့ စာကိုသေချာကြိုးစားရမယ်နော်၊ ၁၀တန်းဆိုတာ လူ့လောကမှာ ဘ၀တစ်ဆစ်ချိုးပဲ သမီး၊ ခပ်ပေါ့ပေါ့နေလို့ မရဘူး၊ အချိန်နဲ့အမျှ စာနဲ့မျက်နှာ မခွာတမ်းကျက်ဖို့လိုတယ်” ၀င့်ဝါ ၉တန်းအောင်တာနဲ့ မိဘတွေက...
ကျွန်တော်တို့ရွာ မီးလောင်နေတယ် ဆရာ
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) “ဟာ . .ဟိုမှာ မီးတောက်တွေ . . မီးတွေ. . မီးတွေ . . ငါတို့ရွာ မီးလောင်နေတယ်” ကိုမင်းကိုရဲ့အလန့်တကြား ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်အော်ဟစ်သံကိုကြားတော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားတွေအားလုံးပဲ ထိတ်ထိတ်ပြာပြာဖြစ်သွားကြတယ်။ အသက် ၃၀...
ခင်ပွန်းကို အရွဲ့တိုက်ရင်း အရက်စွဲသွားသူ
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) အသက် ၄၅ နှစ်အရွယ် မဆူဇန်ဟာအစာကို ကောင်းကောင်းမစားနိုင်တာ၊ အန်တာ၊ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ဗိုက်အောင့်တာ အစရှိတဲ့ ဝေဒနာတွေနဲ့ဆေးရုံကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ “ အန်တယ်ဆိုတာက ဘာတွေစားလို့လဲ၊ အစာ တစ်ခုခုမှားလို့လား၊ အစာမစားဘဲနေလို့လား” လို့ ဆရာက...
ကျွန်တော့်ကို ဒုက္ခရောက်အောင် ဖန်တီးနေကြတယ် ဆရာ . . .
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) အသက် ၅၀ အရွယ် ဦးသောင်းက ဆရာနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲ စပြောပါတယ်။ “ကျွန်တော် ခံစားနေရတာသုံးနှစ်လောက်ရှိပြီ။ ခံစားနေရတာကို ဘယ်သူ့မှမပြောဘဲ ကြိတ်မှိတ်ပြီး ဘုရားရှိခိုးတယ်၊ မေတ္တာပို့တယ်၊ တရားမှတ်တယ် . .အဲဒီလိုတွေနေနေရတာ ဆရာ၊ အခုတော့ ဘယ်လိုမှကြိတ်မခံစားနိုင်တော့လို့၊...
အလိုလိုနေရင်း လန့်နေတယ်ဆရာ. . .
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဦးမောင်ပုတစ်ယောက် အခုတလော နေရင်းထိုင်ရင်း အလိုလိုလန့်နေပါတယ်။ လန့်ရုံတင်မက ဘာမှပင်ပင်ပန်းပန်း မလုပ်ဘဲနဲ့တောင် မောတာ၊ ရင်တွေတလှပ်လှပ်တုန်တာ၊ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့တာ စတဲ့ဝေဒနာလက္ခဏာတွေကို ခံစားနေရပါ တယ်။ ညဘက်ဆို အိပ်မပျော်ဘူး၊ နေ့ဘက်မှာ တောင် ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းဆိုရင်...
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော်(ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) “လ၀န်းမရှိတော့ဘူး၊ ဘယ်ထွက်သွားတာလဲ မသိဘူး၊ လိုက်ရှာကြပါဦး” တစ်အိမ်သားလုံးပြာယာခတ်ပြီး အိမ်ထဲက အခန်းတိုင်း၊ ရေချိုးခန်း အိမ်သာပါမကျန် ၀င်ရှာသူကရှာ၊ လမ်းမပေါ် ထွက်ရှာသူကရှာ၊ အနီးအနား ဖုန်းဆက်သူကဆက်နဲ့ စိတ်ပူပန်ကုန်ကြတယ်။ လ၀န်းတစ်ယောက် ညကြီးအချိန်မတော် အခုလို ပျောက်ပျောက်သွားတာ တစ်ညလည်း...
ရွာဦးကျောင်းက ဆရာတော်ဆီ သွားဖူးမယ် . . .
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) “ရွာဦးကျောင်းကဆရာတော်ကြီးဆီ သွားမယ်၊ ဆရာတော်ဆီ သွားဖူးမယ် . .” ဒေါ်ခင်ဝေက ရန်ကုန်မှာနေပေမယ့် သူငယ်ငယ်တုန်းက နေခဲ့တဲ့ ရွာလေးမှာတုန်းက မကြာခဏ ဥပုသ်သီတင်း ဆောက်တည်ဖူးတဲ့ ရွာဦးကျောင်းကို သွားချင်ကြောင်း မကြာခဏ ပူဆာနေပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လည်း...
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) ဘရဏီက ဆေးမင်ကြောင်တွေကို သဘောကျတဲ့ ကောင်မလေးပါ။ နိုင်ငံခြား မင်းသား၊ မင်းသမီး၊ အဆိုတော်တွေကို သဘောကျပြီး သူတို့လိုပြင်ဆင်ဝတ်စားတတ်တဲ့ ခေတ်ဆန်ဆန်ကောင်မလေးလို့ပြောရင် ပိုမှန်ပါတယ်။ သူသဘောကျတဲ့ မင်းသမီး ကေတီပယ်ရီက လက်ပေါ်မှာဆေးမင်ကြောင်လှလှလေး ထိုးထားတာတွေ့တော့ ဘရဏီအလွန်သဘောကျသွားပြီး သူ့လက်မှာလိုက်ထိုးလိုက်တယ်။...
ပါမောက္ခဒေါက်တာဥာဏ်ဝင်းကျော် (ဦးနှောက်နှင့် စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီး) “ထွီ” . . “ထွီ” . . “ထွီ” ကျော်ဇေဟာ အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်းနေရင်း တံတွေးထွေးချင်စိတ်တွေ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်လိုက်၊ တံတွေးထွေးလိုက် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ တံတွေးတွေထွေးရင်း သူ့စိတ်ထဲမှာ အတွေးမျိုးစုံဝင်နေပြီး အဲဒီအတွေးတွေကြောင့် ညည...